पैसा चो’रेर र’क्सि खाएको रि’समा बुवाले आमाको ज्या’न लिएपछि, तीन छोरीको बिच’ल्ली भिडियो – Life Nepali
पैसा चो’रेर र’क्सि खाएको रि’समा बुवाले आमाको ज्या’न लिएपछि, तीन छोरीको बिच’ल्ली भिडियो
काठमाडौंको दक्षिणकाली नगरपालिका २ मा एउटा दु:खद घ’टना भएको छ । एक पुरुषले आफ्नै श्रीमतीलाई ढुंगाले हा’नेर ह’त्या गरेपछि तीन छोराछोरीको बिचल्ली भएको छ । श्रीमतीको ज्या’न लिएको अ’भियोग मा बुवा प्रहरी हि’रासतमा पुगेपछि आमा गु’माएका तीन छोरीको बिचल्ली भएको छ । बुवाले आफ्नै अगाडी आमाको ज्या’न लिएको जेठी छोरीले बताएकी छन् । सारा नेपालीले उल्लासपूर्ण तरिकाले होली मनाइरहेको बेलामा दक्षिणकालीका यि साना बालबालिकाको भने जिवन उजाडीयो । उनीहरु अहिले सहाराको खोजिमा छन् ।
”वुवाले यसरी ज्या’न लिनुभयो” भनेर जेठी छोरीले बेलिबिस्तार गराएकी छन् । स्थायी ठेगाना खोटागं भएका नविन राईले होलीको दिन घरमै श्रीमतीको ज्या’न लिएर झाडीमा लगेर फा’लि दिएका थिए । छिमेकीले भने इट्टाले थि’चेको भने आफुहरुले नदेखेको बताएका छन् । छोरीले भने आफुले आमालाई त्यसरी हा’नेको देख्न नसके पछि बाहिर भा’गेको बताएकी छन् । आमा पुष्पा राईको नि’धन भयो । बुवाले हा’न्न थालेको देखेपछि ड’राएर भागेकी छोरी फेरी घर आउँदा आमालाई घर भित्र ल’डिरहेको अवस्थामा देखेर बोलाएकी थिइन् ।
उनले बोलाउँदा आमा बोलिनन् । घर वरीपरी आफन्त कोही छैन । हजुरवुवा हजुरआमाको नाम समेत थाहा छैन । बुवाआमाले आफुहरुको स्थायी घर खोटागं हो भन्ने थाहा पाएपनि उनीहरुलाई केही थाहा नभएको बताए । जेठी छोरी अनिषा राईले खोटागंमा पनि आफन्त छन् की छैनन् भन्ने पनि थाहा नभएको बताइन् । आमा र बुवा दुवै जना मा’दक प’दार्थ से’वन गर्ने गरेको छोरीले बताइन् । बुवा पहिले देखि नै मा’तेको अवस्थामा थिए । त्यसको रि’समा आमाले पनि वुवाको पकेटवाट पैसा झिकेर पसलमा गएर र’क्सि किनेर ल्याएर आमाले पनि खा’एको बताइन् ।
त्यही रि’समा बुवाले ढुं’गाले हा’नेर आमाको ज्या’न लिएको बताइन् । आमा र वुवाको घर झ’ग’डा र मा’दक प’दार्थ से’वन गर्ने बानीले यति राम्रो परिवार अहिले बिचल्ली भएको छ । आमाको सहारा बुवाले खोसे भने बुवा आफै प्रहरी हि’रासतमा पुगे । अहिले यि तीन छोरीहरु छिमेकीको सहारामा छन् । आफन्त कोही नभएका कारण आफुहरुलाई सहयोग गरिदिन जेठि छोरीले भिडियो मार्फत आग्रह गरेकी छन् । आफुहरु राम्रो पढ्न र जिवन राम्रो बनाउन चाहने भएपनि त्यसको कुनै सहारा नभएकाले सहयोगको अपेक्षा गरेका छन् ।-भिडियो ”
Previous तिमी नभएको बेला छोरीलाई क’रणी गरे, मेरो ग’ल्ति भयो, मलाई जे*लबाट छुटाउ भन्दै का’रागार बाटै श्रीमतीलाई फोन (भिडियो)
Next छोरीको कारुणीक वयान! “छोरी भएर पनि बाबुको इच्छा पुरा गर्दिनस भन्दै ! “म माथि चढ्नु भयो’ (भिडियो)